Etazonia, Holland ary Italia dia mivondrona ho an'ny Green Mural LGBT
Home » Lahatsoratra farany farany » LGBTQ » Etazonia, Holland ary Italia dia mivondrona ho an'ny Green Mural LGBT
Kolontsaina • Vaovao farany Italia • LGBTQ • Vaovao • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Novambra 21, 2020
Namaky 9 aho
rindrina maitso nataon'i JDL mpanakanto
Ny rindrina maitso voalohany manome voninahitra ny hetsika LGBT + dia notokanana ao Roma eo amin'ny rindrina lehibe nomen'ny Armellini State Industrial Technique Institute (ITIS) any Largo Beato Placido Riccardi, distrikan'i San Paolo (Roma).
Ny tetik'asa, irina mafy sy tohanan'ny Masoivoho Holandey any Italia, dia natolotry ny Yourban 2030 niara-niasa tamin'ny Circolo Mario Mieli niaraka tamin'ny mpiaro ny Kaominina VIII any Roma.
Ny asa mirefy 250 metatra toradroa, ilay rindrina maitso lehibe indrindra any Eropa, dia noforonin'ny mpanakanto an-dalambe holandey JDL ary tsangambato vaovao ho an'i Roma. Ny voalohany amin'ny andiana rindrin'ny mural sy tsangambato, fanomezam-boninahitra ary zavakanto an-kalamanjana rehetra dia natao tamin'ny loko mihinana setroka. Hira ho an'ny fitiavana sy ny zon'ny fahasambarana dia miaraka amin'ny loko sy ny famerenana amin'ny laoniny ny tanàna, famerenana ny famoronana ao an-tanàna ary fandefasana hafatra afaka manova rindrina fotsy ho asan'ny kanto azon'ny rehetra jerena.
Ny mpitarika ny tetikasa dia Yourban2030, ilay Italiana tsy mitady tombom-barotra notarihin'i Veronica De Angelis izay efa nanome ny Hunting Pollution tany Roma tao amin'ny distrikan'i Ostiense.
Tamin'ny 1921, nisy ny Kaongresy Voalohany ho an'ny fanavaozana ny firaisana ara-nofo, izay nametraka ny fototry ny fananganana ny World League for Sex Reform. Sivy sivifolo taona taty aoriana, Outside In, nosoratan'ny mpanakanto an-dalambe holandey JDL, tonga tao Roma ho rindrina maitso voalohany miaraka amin'ny lohahevitra LGBT + teraka avy amin'ny fiaraha-miasa teo amin'i Italia, Etazonia, ary Netherlands izay nitantara ny tantaran'ny fandresena iray ary ady ho an'ny zon'ny fahasambarana.
Rindrina ho an'ny tsirairay: satria tsy misy rindrina rava irery
"Ny asako dia maneho lehilahy sy vehivavy mifanindry ary hita taratra amin'ny fitaratra - ny iray kosa ny iray ary ny iray hafa ao anatin'ny fihaonana am-pitiavana, ao anatin'ny hetsika eken'ny rehetra", hoy ny fanazavan'i JDL, izay nanao sonia ilay sary hosodoko tamin'ny sonia staogy tsy hay hadinoina amin'ny loko mainty sy fotsy, saika sary sy lirika.
“Ny lehilahy miray amin'ny lehilahy na samy vehivavy dia manan-jo hanana fianakaviana iray. Tsy misy olona tokony holavina na tsy ho faly amin'izany. Ny tokony hataontsika dia ny lalàna mifehy ny sendika sivily, ”hoy ny mpanakanto.
Ity fehezanteny revolisionera ity dia notononin'ny filohan'ny fiarahamonina katolika, Papa Francis, tao amin'ny fanadihadiana nataon'ny talen'ny rosiana, Evgeny Afineevsky, "Francis."
"Ny zavatra nasehon'ny hetsika hatramin'ny 1921 ary avy eo hatramin'ny 1969 - ny korontana Stonewall - ary ny fototry ny Homomonumentary any Amsterdam sy ny sisa, dia ny, sahala amin'ny domino miloko, ny fahalalahan'ny iray an'ny fahalalahan'ny rehetra dia nambara Veronica De Angelis , Filohan'ny Yourban2030 ary mpitarika ny tetik'asa, tanora mpandraharaha romana manana diplaoma amin'ny siansa politika izay nanapa-kevitra ny hampiasa vola manokana amin'ny faharetana.
"Ny tolona, ​​ny fihetsiketsehana, ny zava-bita tokana rehetra vitan'ny vondrom-piarahamonina LGBT, dia nahavita izany ho an'ny rehetra - ny fahalalahana hitia ary hitovy endrika amintsika. 'Outside In' dia fihirana ho an'ny fahalalahana izay, manomboka amin'ny lovan'ny hetsika, dia mampiseho ny halehibeny: lalan'ny fanafahana miaraka izay ananantsika rehetra zavatra, tsy ny pelaka ihany, ny lesbiana, ny trans, sns., Fa koa mahitsy, fotsy, mainty - isika rehetra, tsy an-kanavaka. Mural. ”
"Ilay sary hosodoko dia maneho vehivavy mijery fitaratra ary mahita lehilahy taratry ny tarehiny", hoy ny fanazavan'i JDL mpanakanto. “Matetika aho mampiasa ny kantoko mba handikana ny fihetsem-po ho amin'ny fahitana izay mifandray amin'ny olana ara-tsosialy. Tamin'ity indray mitoraka ity dia nahatsapa ho voninahitra ho ahy aho satria nandray anjara tamin'ny eritreritra momba ny asa natokana ho an'ny maha-lahy sy maha-vavy ao Roma.
“Talohan'ny famonoana ny rindrina dia nanadihady olona roa avy amin'ny fiarahamonina LGBT + aho. Ny iray tamin'izy ireo dia transgender avy any Amsterdam. Notantarainy tamiko ny momba ireo tolona lalina tsy maintsy lalovany mba hahatsapany ny tenany ao an-tranony. 'Ady ara-pihetseham-po sy ara-batana io dia tena ady nandritra ny taona maro,' hoy izy.
“Ny tanjoko dia ny handika sy 'hipoaka' io fihetseham-po io amin'ny alàlan'ny rindrina - ny tolona hanaiky ny maha-ianao anao. Ny tanjona dia ny hamoronana fahatakarana ara-pientanam-po amin'ity vondrona kendrena ity, ary antenaina fa ity rindrina ity dia fampahatsiahivana hanaiky hoe iza marina ianao (na ireo olon-tianao). ”
"Any ivelany," hoy i Frank Ferrante, mpiara-manorina Yourban2030 Etazonia, "ny iraka teraka tao Stonewall dia mitohy, miaraka amin'ny fiarovana ny tontolo iainana araka ny famantarana ny Agenda 2030. Asa kanto natao hampitomboana ny fahatsiarovan-tena sy hikolokoloana ny fanantenan'ny tsirairay sy ny reharehany. Ity dia ivelan'ny trano: tsangambato ho an'ny rehetra, fivoriana sy fizarana vaovao, izay hankalazana ny hafatra manerantany momba ny fitiavana sy ny fireharehana. ”
Roa taona taorian'ny Hunting Pollution, Yourban2030, natsangan'i Veronica De Angelis niaraka tamin'ny mpitantana ny tetikasa Maura Crudeli, dia niverina niaraka tamina consortium etika iraisam-pirenena ho an'ny sangan'asa miloko 250 metatra toradroa vita amin'ny setroka mihinana setroka natokana ho an'i La Karl Du Pigné - sary famantarana ny hetsika, izay ankehitriny mahatonga azy io ho mariky ny zon'ny fahasambarana, ny zon'ny mahomby.
Miaraka amin'ny Outside In, ny fahalalahana dia mifanindry amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Ny lokon'ny Airlite mihinana setroka 250 metatra toradroa izay namoronana ilay rindrina maitso, dia manala ny setroky ny fiara 53 misy petrol euro 6 ary fiara 40 diesel euro 6 isan'andro. Izy io dia fo maintso vaovao eo an-tsisin'i Roma amin'ny endrika rindrina maitso.
"Tianay mafy ity rindrina ity natokana ho an'i Karl, Andrea Berardicurti, andry manan-tantara ho an'ny Circolo Mario Mieli ary ho an'ny fiarahamonina LGBT + iray manontolo," hoy i Valerio Cola-masi Battaglia, filohan'ny Circolo Mario Mieli.
“Ny vondrom-piarahamoninay dia sahirana foana nanaparitaka ny rindrin'ny fitsarana an-tendrony, ary tamin'ity indray mitoraka ity dia nanapa-kevitra ny hanohana sy handray ny tetikasa Yourban 2030 izahay hanovana rindrina ho mariky ny fahalalahana, ny fanekena ary ny fitiavana ny tena. Faly kokoa aza izahay, satria ho ao amin'ny distrikan'i San Paolo eo amin'ny rindrin'ny Institut Technique Armellini izany. Andao hanomboka indray avy any amin'ny faritany sy amin'ireo taranaka ho avy mba hananganana endrika firaisankina, fitiavana ary fanajana. ”
"Rehefa nifandray tamin'ny masoivoho i Yourban 2030 dia faly izahay," hoy ny masoivoho lefitra ny Netherlands, Dewi van de Weerd. “Faly izahay amin'ny fiaraha-miasa sy ny valiny, ihany koa satria ny famoronana ilay artista holandey JDL dia miteraka antony tsara telo. Fankalazana ny tolona LGBT 50 taona io. Ary farany, novainy ho rindrin'ny kanto ho an'ny besinimaro ny rindrina miboridana. ”
"Afaka manatanteraka an'io asa io amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny zavatra niainan'i Mieli, ny andraikitra lehibe ao anatin'ny fiarahamonina misy anay amin'ny toerana fanabeazana sy kolontsaina, toy ny Armellini Institute ary farany, ny matihanina ary indrindra ny fahaizana manao fanavaozana miaraka amin'ny fanajana ny ny tontolon'ny Yourban 2030, dia fifandraisana iray izay notandremanay ho toy ny Kaontina am-pitandremana sy amin'ny fikirizanana tanteraka, ary faly izahay fa nahatratra vokatra miavaka toa ilay notokanana androany, ”hoy ny nambaran'ny filohan'ny Roma VIII. monisipaly, Amedeo Ciaccheri.
Mipetraka any amin'ny firenena 50 mahery miaraka amin'ny fanamarinana iraisampirenena 19, Airlite dia teknolojia ampidirina amina loko mineraly amin'ny fomba voajanahary tanteraka, noho izany, tsy misy akora simika na biocide. Noho ny herin'ny hazavana sy ny fisian'ny hamandoana eny amin'ny habakabaka dia mamorona sakana amin'ireo oxidants izay mamaivay ireo singa biolojika manimba izy ireo, manova azy ireo ho zavatra tsy mampidi-doza. Ny fananana manohitra ny bakteria sy ny antivirus dia mampifangaro ny fahafaha-mampihena ny loto maloto amin'ny rivotra, toy ny azota azota (NOx) sy ny fambolena voajanahary mampidi-doza (VOC) ao anatin'izany ny formaldehyde - toetra tsy manam-paharoa izay tamin'ny taona 2019 dia nanondro tamin'ny fomba ofisialy ny Airlite ho iray amin'ireo ireo fanavaozana 4 izay afaka mampisy fahasamihafana amin'ny ady amin'ny fahalotoan'ny rivotra eto an-tany.
Ramatoa Veronica De Angelis dia nanantena mialoha fa hisy hetsika tahaka izany ihany koa any an-tanànan'i Bologna sy Milan amin'ny fiandohan'ny 2021.
Hyatt dia manatsara ny portfolio-ny fialam-boly amin'ny fahazoana ...
Mandrahona ny famerenana amin'ny indostria ny fanakanana ny volan'ny zotram-piaramanidina
Birao fivoriambe any Miami sy mpitsidika ...
Tsy nahomby ny fanarenana ny dia an-habakabaka any Eropa
El Al Israel Airlines dia mandefa sidina mivantana mankany ...
Fetiben'ny sarimihetsika iraisam-pirenena Zanzibar hampivoatra ny nosy ...
Nambaran'ny governemanta ny fanitsakitsahana ny tetikasan'ny fizahantany amin'ny ...
Ny St. Regis San Francisco dia manambara vaovao vaovao mahafinaritra ...
Israel dia nametraka fironana manaitra vaovao amin'ny fanidiana ny fizahan-tany ...
Ny fifidianana UNWTO dia nanamboatra an'i Alain St. Ange A ...
Fanafihana tampoka an'i Hawaii nataon'i China sy Russia, ny ...
Miatrika fameperana fitsangatsanganana vaovao ho an'i Hawaii ireo mpitsidika
Veloma i Le Professionnel: kintana frantsay ikoizana Jean ...
Ahiana mafy izaitsizy: Noraran'ny Hong Kong ny mpandeha rehetra ...
Mandany vola amin'ny $ 1.44 Miliara amerikana ny mpitsidika any Hawaii ...
Fanampiana tadiavina ho an'ny United Airlines: Vaksiny irery!
St. Eustatius mandray tsara ireo mpizahatany vita vaksiny feno
Venice, Kalifornia rehetra ho an'ny Armani Style Beauty
Nanamafy ny tranga Ebola voalohany ny Cote d'Ivoire tamin'ny 25 ...
Fikambanan'ny Fikambanan'ny mpikarakara momba ny dia no nanambara ...
Filaharana lehibe indrindra amin'ny tantara: nanampy an'i United ny Boeing 270 sy ...
US Travel Advisories dia iraisam-pirenena ...
Angletera hanainga ny fetra COVID-19 rehetra amin'ny 19 Jolay ...
Ny sidina San José mankany Reno-Tahoe amin'ny Southwest Airlines ...
Lufthansa dia mamerina ny sarany amerikana avaratra sy aziatika ...
Ambasady amerikana ao Eswatini fampitandremana: Mijanona ao an-trano!
18 taona hanompo amin'ny maha Ambasadaoron'i Port Canaveral vaovao
Ny mozika tsy mijanona mihitsy any New Orleans, na dia mandritra ...
Ny fankahalain'ny UNWTO ho an'ny WTTC dia misy fitiavana sioka ...
Famindrana any Doha, Abu Dhabi, Dubai: mpandeha fiaramanidina ...
Fraport dia mahazo tambin-karama amin'ny fikojakojana ...
Ny tantaram-pitiavantsika miaraka amin'ireo nosy Seychelles kanto
Inona no Vaovao any The Bahamas amin'ny volana Aogositra
Miverina ny fangatahana dia lavitra nefa mbola ambany lavitra talohan'ny COVID ...
Nomena ny seranam-piaramanidin'i Portemetyevo any Mosko ny ...
Fiaramanidina an-tsambo fahavaratra Bahamas ankehitriny miaraka amina fitaovana feno
Ao amin'ny Sandals Resorts no ilainao dia ny fitiavana
Ny vanim-potoanan'ny fanombohana fiaramanidina afara
Hofan-trano fialan-tsasatra any Hawaii: Tsara kokoa, saingy mbola tsy eo